Udiyaar Garowga Ciidul Fidriga oo siweyn looga dareemayo Magaalooyinka Somalia – SBC
Udiyaar Garowga Ciidul Fidriga oo siweyn looga dareemayo Magaalooyinka Somalia
Posted by editor on August 21, 2011 Comments
Magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa si dar dar leh uga socda dhaq dhaqaaqyo ganacsi oo aad u xoogan kuwaas oo loogu diyaar garoobayo Ciida Soonfur maadaama ay mudo maalmo ah oo aad u kooban ay naga xigaan.
Magaalooyinka Somalia siiba kuwa Puntland ayaa laga dareemayaa dhaq dhaqaaqa ganacsi, iyadoo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Gaalkacyo, Laascaanood, Garoowe, Qardho iyo Boosaaso, lagu arki karo badeecado cusub oo ay ganacsatadu soo iibgeeyeen, kuwaas oo ay ugu talagaleen ciidka ciidul Fidriga.
Waxaa sidoo kale aad arki kartaa marka aad booqato suuqyadaasi dad aad u farabadan oo iyagu iibsanaya badeecooyinka ganacstada ay soo bandhigeen sida dharka, Kabaha. Iyo weliba qalabka caruurta ay ku ciyaaraan,
Liibaan C/laahi Faarax Qaran waa u qaabilsanaha Xafiiska SBC International ee magaalada Gaalkacyo, waxaanu maanta booqday suuqyada waaweyn ee ku yaala magaaladaasi, waxaana uu soo sheegayaa in dhaq dhaqaaqa ganacsi iyo kan iibsiga dadka uu yahay mid aad u sareeya islamarkaana ay dadku si aad ah ugu diyaar garoobayaan maalinta xiidul fidriga.
Sidoo kale udiyaar garowga Maalinta ku weyn umadaha islaamka ee ciida waxaa ay ka socdaan magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari, waxaana mar aynu maanta booqasho ku tagnay lagu arki karay waalidiin aad u farabadan oo ilmahooda ganacanta geysta iyagoona u iibinaya waxyaabaha kala duwan ee ay doonayaan sida dharka, Kabaha, iyo qalabka ay ku ciyaaraan.
Umada Islaamka ee Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan waxay wadaan u diyaar garowgan, waxaana ay Maalinta ciida ah ee loo diyaar garoobayo ka haray oo keliya mudo dhan 9 maalmood.
walaal waxaan oran lahaa waa wax laga ficanyahay website bulsho in lagu so qoro maqaal ay so qoreen qabiil , waana waxa daba dhaca ku riday bulshada marka waxaan bahda sbc kula talin lahaa inay qabtaan waxa la gudboon mana uga baran inan ka akhrino maqaal beled . waana advice .